MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း(၆)
အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း(၆)
ဖက်ဒရယ်မူနှင့် ပတ်သက်သော လူမျိုးပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဒုတိယနေ့ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြီးနောက် နာရီပိုင်းမျှ အကြာ ည (၁၁) နာရီတွင် မင်္ဂလာဒုံတပ်နယ်မှ စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့ နံနက်တွင် နိုင်ငံတော်အာဏာ သိမ်းယူရေးအတွက် ပထစအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်၊ တရားဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်အကြီးအကဲများ၊ စော်ဘွားများကို ဖမ်းဆီးရန်နှင့် အချက်အချာဌာနများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်များ ၀င်ရောက်ခြင်း မပြုမီ ရက်အနည်းငယ်ကပင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းနှင့် စစ်တပ်အကြီးအကဲအချို့သည် နိုင်ငံတော် အာဏာကို သိမ်းပိုက်ရေးအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် ပြည်စောင့်ရဲတပ်ရင်း၏ အခြေအနေကိုပင် ကြိုတင်၍ စူးစမ်းလေ့လာထားခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က ပြည်စောင့်ရဲတပ်ဌာန၏ ဒုတိယရဲတပ်ချုပ်မှာ ဗိုလ်မှူးကြီး တန်ယုဆိုင် (ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဖေ၏ယောက်ဖ)ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ဦးဆောင်သော စစ်တပ်အကြီးအကဲ အချို့သည် လူမျိုးပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ စတင်ကျင်းပသည့် ၁၉၆၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူရေးကို အဆောတလျင် ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း အမိန့်ဖြင့် စစ်တပ်အကြီးအကဲတို့က နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူရေးအတွက် ပထစအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၊ တရားဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်အကြီးအကဲများနှင့် စော်ဘွားများကို ဖမ်းဆီးရေးနှင့် အရေးပါသော နေရာဌာနများကို ထိန်းသိမ်းထားရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တပ်မှူးများအား တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့စဉ်က အာဏာသိမ်းယူသည့် နေ့ရက်နှင့် အာဏာသိမ်းယူရေး အစီအစဉ် စတင်မည့် အချိန်နာရီတို့ကို လျှို့ဝှက်ထားသဖြင့် မသိခဲ့ရဟု ဆိုသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင်မှ အာဏာသိမ်းရန် စစ်ဆေးရေးကို ဆင်နွှဲကြရမည်။ တာဝန်ခံတပ်မှူးများသည် စစ်ဆင်ရေး ဆင်နွှဲရန် အမိန့်ရရှိသဖြင့် မိမိတို့၏ တပ်များကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ထိုညတွင်ပင် စစ်ဆင်ရေးအတွက် အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် ဆင်နွှဲရန် အထက်အကြီးအကဲထံမှ နုတ်မိန့်ထွက်လာသည်။ ထိုအခါ စစ်ဆင်ရေး တာဝန်ခံတပ်မှူးများသည် အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲရမည့်နေ့ကို မတ်လ ၂ ရက်နေ့ဟုလည်းကောင်း၊ စတင်မည့်အချိန်ကို မတ်လ ၁ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီတိတိဟု လည်းကောင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤအစီအစဉ်ကို တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးတင်ဦး(မျက်မှန်ကြီး)နှင့် အချက်ပြ ဆက်သွယ်ရေးတပ်မှူး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဘနီတို့လည်း သိရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ထိုစစ်ဆင်ရေး အစီအစဉ်ကို သိပြီးဖြစ်သော တပ်မတော်တပ်မှူးများသည် အခြားအရာရှိများ၊ မိမိတို့ လက်အောက်အရာရှိများနှင့် စစ်သည်များကို ပြောကြားခြင်း မပြုခဲ့ချေ။ စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ်ကို ဆင်နွှဲရန်သာ တပ်လှန့်ထားခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့၊ ည ၁၁ နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ ချီတက်ရမည့် တပ်ဖွဲ့များကို စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ခံများက စစ်ဆင်ရေးအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး အသင့်ပြင်စေသည်။ ထို့နောက် လက်အောက်အရာရှိများအား တာဝန်အသီးသီး ခွဲဝေပေးအပ်ပြီး ည ၁၂ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ စစ်ချီခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်သည် မင်္ဂလာဒုံလေယာဉ်ကွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေးစခန်း၊ အသံလွှင့်ရုံ၊ ကြေးနန်းဌာန၊ ပါလီမန်အဆောက်အအုံ၊ ရဲမင်းကြီးရုံး၊ စစ်ရဲတပ်၊ ပြည်ထောင်စုဘဏ်၊ ဘူတာရုံ၊ ဆိပ်ကမ်း၊ ရဲဌာနများ၊ ၀န်ကြီးများ နေထိုင်သော ဝင်ဒါမီယာကုတ် (ယခု ရွှေလီလမ်း) ရှိ ရှမ်းဂေဟာ ၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းသွယ်အမှတ်(၄၂)ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်နေအိမ်၊ ကုက္ကိုင်းလမ်းနှင့် ဂွတ္တလစ်လမ်း (ယခု ဆရာစံလမ်း) ထောင့်ရှိ စဝ်ရွှေသိုက်နေအိမ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းရှိ တရားဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်သိန်းနေအိမ်၊ ဖရေဇာလမ်း (ယခု ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ တော်ဝင်လမ်း) ရှိ ကယားဂေဟာတို့ကို သွားဝိုင်းရံထားလိုက်ကြသည်။ နံနက် ၂ နာရီခန့်တွင် တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့များသည် ဂွတ္တလစ်လမ်း၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းသွယ်အမှတ် (၄၂) တွင် နေထိုင်သော ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု၊ ဝန်ကြီးဒေါက်တာ ဦးဧမောင်နှင့် ပြည်လမ်း ခုနှစ်မိုင်တွင် နေထိုင်သော မိုးနဲစော်ဘွား စ၀်ပြည့်၊ မိုင်းနောင်စော်ဘွား စ၀်အုန်းမောင်တို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ကားပေါ်သို့ တင်အပြီး၌ စကားဝှက်ဖြင့် “လောက်ကောင်” မိပြီ ဟု ဌာနချုပ်သို့ သတင်းပို့ခဲ့သည်။ နောင်တွင် ဦးနု၏ သမီးကြီးဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းစန်းနုက ကျွန်မကြားတာက “ဇာတ်ကောင်”ပါပဲ။ ဖေဖေနားကြားလွဲသွားတယ်နဲ့ တူပါတယ် ဟူ၍ ပြောပြခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် ရန်ကုန်ဘဆွေ၏ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံသမိုင်း (လက်နှိပ်စက်စာမူ) ၌ ဦးနုအား ဖမ်းစဉ်က စကားဝှက် “လောက်ကောင်” ဟုသာ ဖေါ်ပြပါရှိ သည်။ ယင်းစာမူ၌ အခြားဝန်ကြီးများ၏ နာမည်ကိုလည်း စကားဝှက်ဖြင့် “ဖာသယ်” ၊ “မိန်းမရွှင်”၊ “ဆိတ်လစေ့”၊ “နှစ်ဖက်ချွန်” ဟူ၍ သုံးနှုန်းထားရာ ရန်ကုန်ဘဆွေနှင့် အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းတို့ ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေမည်လားဟု တွေးထင်စရာပင် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် နံနက် ၃ နရီခန့်တွင် အခြားဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဦးရာရှစ်၊ သခင်တင်၊ သခင်တင်မောင် ၊ဦးသွင်၊ ဦးဘစော၊ ဒေါက်တာစောလှထွန်း၊ စ၀်ခွန်ချို၊ စ၀်ဝဏ္ဏ၊ နိုင်အောင်ထွန်း၊ဦးဘမြိုင်၊ပါလီမန်အတွင်းဝန်ကယားဦးစိန်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ အင်းလျားလမ်းနေ အိမ်သစ်တွင် နေထိုင်သော သမ္မတ မန်းဝင်းမောင်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ တရားဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်သိန်းကိုလည်းကောင်း၊ ကယားဂေဟာတွင် တည်းခိုနေသော ဦးကြာပု၊ ဦးစိုးမောင်၊ ဦးလွန်း၊ ဦးချစ်ဦး ၊ ဦးထွန်းမြင့် (တောင်ကြီး) တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် လူမျိုးစုလွှတ်တော် ဥက္ကဌများကိုလည်းကောင်း ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဖမ်းဆီးရာတွင် တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းယူလိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြ၍၊ ၎င်းတို့အိမ်တွင်ထားရှိသော လက်နက်များကိုလည်း အပ်နှံစေခဲ့သည်။ တရားဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်သိန်းကို ဖမ်းစဉ်က ဖမ်းဝရမ်းတောင်းသဖြင့်၊ ဖမ်းဆီးသည့် တပ်မတော်အရာရှိလည်း တွေဝေသွားပြီး တပ်ဖွဲ့များကို အုပ်ချုပ်၍ လိုက်ပါလာခဲ့သော တပ်မှူးထံ သတင်းပို့ခဲ့သည်။ တပ်မှူးကလည်း ဦးမြင့်သိန်း၏ အိမ်သို့ လိုက်သွားပြီး တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ဝရမ်းမလိုကြောင်း ပြောကြား၍ ဖမ်းဆီးခဲ့ရသည် ဟု ဆိုသည်။
ဝန်ကြီးများ၏ နေအိမ်တွင် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနေကြရသော ရဲအဖွဲ့ဝင်များအား စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာလျှင် ခုခံပစ်ခတ်ခြင်း မပြုရန် ကြိုတင်ညွှန်ကြားထားသောကြောင့် ဝန်ကြီးများကို ဖမ်းဆီးရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေခဲ့သည်။ သို့သော် ရန်ကုန်မြို့ ကုက္ကိုင်းလမ်းနှင့် ဂွတ္တလစ်လမ်း (ယခု ဆရာစံလမ်း) ထောင့်ရှိ စဝ်ရွှေသိုက် နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိစဉ်က လုံခြုံရေးအစောင့်များအား ရှမ်းဘာသာဖြင့် ခုံခံခြင်း မပြုရန် အော်၍ ပြောသေးသည်။ သို့သော်အစောင့်များက ပစ်ခတ်သဖြင့် စစ်တပ်မှလည်း ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရာတွင် စ၀်ရွှေသိုက်၏ သားငယ် အသက် (၁၇) နှစ်အရွယ်ရှိ စဝ်မီမီသိုက်ခေါ် စဝ်စေးဟုမ်ဖမှာ ဦးခေါင်းနှင့် ခြေထောက်တွင် ကျည်ဆံထိမှန်၍ သေဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ စ၀်မီမီသိုက် သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စဝ်မီမီသိုက်၏ အစ်ကို (ယူဂျင်းသိုက် – Eugene Taike) က ရန်ကင်းရဲဌာနတွင် အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့၊ နံနက် ၂ နာရီခန့်တွင် အမျိုးအမည်မသိသော ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသူများက အိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာကာ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သောကြောင့် မိမိ၏ညီ စဝ်မီမီသိုက်ကို ထိမှန်သေဆုံးသွားကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကင်းရဲဌာနမှ လူသတ်မှု ပုဒ်မ ၃၀၂ အရ အမှုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ စစ်တပ်ကမူ စ၀်မီမီသိုက် သေခဲ့ရခြင်းအတွက် စာနာထောက်ထားမှု ရှိကြောင်း ပြောကြားပြီး တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းကလည်း စ၀်မီမီသိုက် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခြင်းကို တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင်များက အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲမိကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် သဝဏ်လွှာကို ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီး စဝ်ရွှေသိုက်နှင့် မဟာဒေဝီတို့ထံ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က မဟာဒေဝီ စဝ်ဟိန်ခမ်းမှာ အင်္ဂလန်သို့ ရောက်နေသဖြင့် ဗိုလ်မှူးကြီး စောမြင့်သည် ဝမ်းနည်းသဝဏ်လွှာကို စဝ်ရွှေသိုက်၏ သားအကြီးဆုံးဖြစ်သူ စဝ်ဆိုင်အုံ၏ လက်သို့ ပေးအပ်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ဈာပနအခမ်းအနားသို့လည်း တော်လှန်ရေးကောင်စီက လွမ်းသူ့ပန်းခွေ ပေးပို့ခဲ့သေးသည်။ အာဏာသိမ်းပိုက်သည့်နေ့မှ အဖြစ်အပျက်နောင်တွင် ဦးနုက သူ၏ “တာတေစနေသား” စာအုပ်၌ ဤသို့ ဖော်ပြထားသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် အသံလွှင့်ရုံ၌ ပြည်နယ်များ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ဖက်ဒရယ်မူ ရေးဆွဲရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ စတင်ကျင်းပခွင့် ပြုခဲ့သည်။
ည ၉ နာရီလောက်တွင် အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်၍ နောက်ရက်သို့ ရွှေ့လိုက်သည်။ အစည်းအဝေးပြီးသောအခါ ရှမ်းပြည်နယ် ဥက္ကဌ စောခွန်ချိုနှင့် ကယားပြည်နယ်ဥက္ကဌ စောဝဏ္ဏတို့ သည် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုနှင့်အတူ ဝင်ဒါမီယာဝန်းအတွင်း ဝန်ကြီးချုပ် နေအိမ်သို့ လိုက်လာကြသည်။
၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုက “အဆိုတွေ တင်ဖို့ ကျွန်တော်က ဖိတ်လို အဆိုတွေကို တင်သွင်းရမှာ၊ ကောလာဟလလွှင့်နေကြတဲ့ လူတွေဟာ ဒီအချက်ကို မသိကြဘူးထင်တယ်” ဟု ပြောရာ စောခွန်ချိုက – ဟုတ်ပါတယ်၊ ဝန်ကြီးချုပ်က ဖိတ်လို့ ကျွန်တော်တို့က အဆိုတင်ပြရမှာပါ၊ တင်ပြပြန်တော့လည်း ဒီတင်ပြတဲ့ အဆိုအတိုင်း လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ကျွန်တော်တို့မှာ မရှိပါဘူး၊ အဆိုကို ဆွေးနွေးပြီး လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကို လုပ်ပေးပါ။ မလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကျတော့ ပစ်ပယ်လိုက်ပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ နာခံပါ့မယ်” ဟု ပြန်ပြောသည်။
ထိုစဉ်က စောခွန်ချို၊ စောဝဏ္ဏ နှင့် ဦးနုတို့ စကားထိုင်ပြောနေကြသည်မှာ ည ၁၁ နာရီလောက်မှ ပြီးသည်။ထိုအချိန်လောက်အထိဗိုလ်နေဝင်းသည်လေဟာပြင်ဇာတ်ရုံ၌တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကဇာတ်အဖွဲ့မှတင်ဆက်သောဘဲလေးပြဇာတ်ကိုဟန်မပျက်ကြည့်နေခဲ့သည်ဟုဦးနုသားသမီးများကပြောပြကြပါသည်။
ဦးနုသည် ဝင်ဒါမီယာထဲမှာ မနေပေ။ ဂွတ္တလစ်ပြည်ထောင်စု လမ်းကြားထဲမှ သူ့အိမ်၏ တောင်ဘက်မှာ တစ်ထပ်အိမ်ဌားနေသည်။ သူ့အိမ်အပြန်မှာ သူ့အကြံပေးအရာရှိ ဦးအုံးနှင့်အတူ လိုက်ပါလာပြီး၊ ဦးအုံးက ဦးနုကို သူ့အိမ်ရောက်သဖြင့် ကားပေါ်က ဆင်းခါနီးမှာ ပြောသွားသည်။
“လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးရင် နိုင်ငံရေးက ထွက်တော့မယ်လို့ ကိုကြီးနုက ပြောနေပေမယ့် တပ်မတော်ကတော့ ကိုကြီးနုထွက်တာကို သဘောတူမယ် မထင်ဘူး။ ဆက်လုပ်ဖို့ ဝိုင်းပြီး တောင်းပန်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်”
ဦးနုသည် သူ့အိမ်ခန်းထဲ ရောက်သောအခါ နောက်ညမှာ ဖက်ဒရယ်မူနှင့်ပတ်သက်သည့် သူပြောမည့် မိန့်ခွန်းကို တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်ကြည့်သည်။ ထို့နောက် သူ့အစဉ်အလာအတိုင်း ဘုရားဝတ်ပြုပြီး ၁၂ နာရီ ကျော်လောက်တွင် အိပ်ယာဝင်ခဲ့သည်။
သန်းခေါင်ကျော်ချိန်လောက် ရှိသောအခါ သူ့အိမ်ဝင်းထဲ၌ လူသံကြားရသဖြင့် အိပ်ပျော်နေရာမှ နိုးလာသည့်အခါ သူ့အခန်းထဲ၌ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ကို ခြောက်လုံးပြူးကိုင်လျက်ရှိသည်ကို ဦးနု တွေ့လိုက်ရသည်။
ဦးနုက “မင်းက ဘာလဲ”
ထိုစဉ် စစ်ဗိုလ်က “ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီ”
ဦးနု “အဲဒီလိုဆိုတော့ ငါက ဘာလုပ်ရမှာလဲ”
စစ်ဗိုလ်က “ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ”
ဦးနုလည်း ဘာမှမပြောဘဲ သူ့အပေါ် အင်္ကျီကို ဝတ်လိုက်ပြီး ဆီးသွားရအောင် ရေချိုးခန်း၊ တံခါးကို ဖွင့်လိုက်ရာ၊ စစ်ဗိုလ်က “ ဦး…. ဘာလုပ်မလို့လဲ”
ဦးနုက စိတ်မရှည်စွာဖြင့် “ဆီးသွားမလို့ဟေ့” ခပ်ကျယ်ကျယ် ပြောလိုက်သည်။ စစ်ဗိုလ်က “ရေချိုးခန်းထဲ မဝင်ပါနဲ့ ၊ ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ” ဟု ပြောပြီး စစ်ဗိုလ်ကလေးသည် ဦးနုအား အတင်းခေါ်ဆောင်သွားရာဆီးပင်မသွားလိုက်ရပေ။
အိမ်ဝသို့ ရောက်လာသောအခါ ကားမလာသေးသဖြင့် ခဏစောင့်နေရသည်။ အနားရှိ စစ်သားတစ်ယောက်က “လောက်ကောင်မိပြီ၊ လောက်ကောင် မိပြီ” ဆိုပြီး ဝေါ်ကီတော်ကီ စကားပြောစက်ဖြင့် သူ့ဌာနချုပ်ကို လှမ်း၍ သတင်းပို့သံကြားသောအခါ အဓိပ္ပာယ်ကို ဦးနု နားမလည်။ နောက်မှ စကားဝှက်ဖြင့် သူ့ကို “လောက်ကောင်” ဟု ခေါ်မှန်း သူသိသွားသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဘဝမှ အရှင်လတ်လတ် လောက်ကောင်ဘဝသို့ ရောက်သွားရသည့် လောကဓံတရားဟာ တယ်မှန်ပါကလား ဟု သူ့ဟာသူတွေးရင်း ပြုံးမိသွားလေသည်။
ဦးနုကို စစ်သားများက မင်္ဂလာဒုံသို့ ခေါ်သွားကြ၏။ မနက် ၄ နာရီလောက်တွင် နှစ်ထပ်တိုက် ကလေးသို့ ရောက်သွားကြ၏။
သူ့ကိုဖမ်းတာ အောက်က စစ်ဗိုလ်ကလေးတွေ ဖမ်းတာပဲ ဖြစ်မှာပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းဟာ ဦးနု အဖမ်းခံရတယ် ဆိုတာသိလျှင် ဦးနုထံသို့ ချက်ချင်း ရောက်လာမှာပဲ ဟု တွေးပြီး၊ ဦးနု စိတ်သိပ်မပူပေ။ အိပ်ပျက်ပျက်နှင့် တရေးအိပ်လိုက်သည်။ မနက် ၈ နာရီလောက် ရှိတော့မှ တရေးနိုး၏။ မနက် ၁ဝ နာရီလောက်တွင် သူ့အဝတ်အစားတွေ ထည့်ထားသည့် သေတ္တာတစ်လုံး သူ့အခန်းထဲသို့ ရောက်လာ၏။ သေတ္တာကို ကြည့်ပြီး အိမ်က ဘာကြောင့် ပို့လိုက်တာလဲ။ မကြာခင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း သူ့ကို လာခေါ်မှာပဲ ဟု သူ့စိတ်ထဲက ပြောလိုက်ပြန်၏။ထိုအချိန်အထိ နေဝင်းကို ယုံကြည်နေသေးသည်။
ညနေ ၅ နာရီလောက်ကျတော့ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက် လာခေါ်သည်။ သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမောင် ရောက်နေကြောင်းပြောလျှင် သူ့ကို ဖမ်းတာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း သိသွားပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် မလာနိုင်လို့ သမ္မတကြီးဟာ သူ့ကို ခေါ်ရအောင် လိုက်တာပဲဟု တွေးပြီး အောက်သို့ ဆင်းလိုက်သွားသည်။
သမ္မတ ဦးဝင်းမောင်က “ဝန်ကြီးချုပ်၊ မနက်က ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း အသံလွှင့်တာကို ကြားလိုက်ရလား” ဟု မေး၏။ ဦးနုက “မကြားမိပါဘူး၊ သမ္မတကြီး ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဘာတွေ လွှင့်သွားသလဲ”
ဦးဝင်းမောင်က “သူလွှင့်တာကတော့ ခပ်တိုတိုပါပဲ၊ ပြည်တွင်းမှာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရအောင် တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းလိုက်ရပါတယ်” လို့ လွှင့်သွားတယ်။
ထိုစကားကို ကြားလိုက်ရသောအခါ ဦးနုသည် ဤကမ္ဘာလောက၌ နေနှင့်လ ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ရင်တောင် အံ့သြမိမည် မဟုတ်ဘဲ၊ အံ့သြစွာဖြင့် ဦးနုပါးစပ်မှ -
“သြော်… ဒီလိုကိုး”ဟု လှစ်ကနဲ ထွက်သွားပြီး တမိနစ်ခန့် စကားမပြောနိုင်ဘဲ မတုန်လှုပ်ကျောက်ရုပ်ပမာ တစ်ခုခုကို စဉ်းစားနေသည့် အနေမျိုးဖြင့် သူ့ရှေ့တည့်တည့် ကြမ်းပြင်ကို အဓိပ္ပာယ်မရှိ စိုက်ကြည့်နေမိပါတော့သည်” ဟူ၍ ရေးသားထားလေသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့၊ နံနက်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီက ဖမ်းဆီးခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ သမ္မတမန်းဝင်းမောင်၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု၊ ဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသော သခင်တင်၊ ဒေါက်တာ ဦးဧမောင်၊ ဦးရာရှစ်၊ ဦးဘစော၊ သခင်တင်မောင်၊ ဦးသွင် စဝ်ခွန်ချို၊ စ၀်ဝဏ္ဏ၊ ဒေါက်တာစောလှထွန်း၊ ဦးဇာရဲလျန်၊ ဦးဘမြိုင်၊ နိုင်အောင်ထွန်း၊ တရားဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်သိန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ မန်းဘဆိုင်၊ လူမျိုးစုလွှတ်တော်ဥက္ကဌ စဝ်ခွန်ကြည်၊ ညောင်ရွှေစော်ဘွား သမ္မတဟောင်း စဝ်ရွှေသိုက်၊ မိုးနဲစော်ဘွား စဝ်ပြည့်၊ လဲချားစော်ဘွား စဝ်နွံ၊ သာမိုင်းခမ်းစော်ဘွား စဝ်မန်လစ်၊ စဝ်ခွန်ထီး၊ စဝ်မန်ဖ (သိန္နီမြောက်ပိုင်းအမတ်)၊ စဝ်အောင်ဖူး (လွိုင်လင် အလယ်ပိုင်းအမတ်)၊ ဦးချစ် (လွိုင်လင် တောင်ပိုင်းအမတ်)၊ ဦးရီရောင်း (ကျိုင်းတုံမြောက်ပိုင်းအမတ်)၊ ဦးခွန်နော် (ကျိုင်းတုံအနောက်ပိုင်း အမတ်)၊ ဦးဖြူ (မိုင်းပွန်အမတ်)၊ ဦးကျော်စိန် (သာမိုင်းခမ်း အမတ်)၊ ဦးလွန်း (စကားအမတ်)၊ ဦးအမ်ဇော်လ (ကွတ်ခိုင်အမတ်)၊ ဦးစိုးမောင်၊ ဦးချစ်ဦး၊ ဦးသန်းတင်၊ ဦးတင်အောင်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့ နံနက်တွင်အဖမ်းမခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှာ ငပလီသို့ ရောက်နေသော ဗိုလ်မှူးအောင်နှင့် သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ရန် လျာထားပြီးဖြစ်သော ဆမားဒူးဝါ ဆင်ဝါးနောင် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဆမားဒူဝါးဆင်ဝါးနောင်မှာ မြစ်ကြီးနားခရိုင်အတွင်းရှိ ၎င်း၏ ဘိုးဘွားမိဘများ အစဉ်အဆက် နေထိုင်ခဲ့သော ဆမားရွာသို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
အဖမ်းခံရသူတို့တွင် ဒေါက်တာ စောလှထွန်းနှင့် ဦးဇာရဲလျန်တို့မှအပ ကရင်ပြည်နယ် ချင်းဝိသေသတိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့မှ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ခြင်း မရှိပေ။
မတ်လ ၂ ရက်နေ့ နံနက်က အဖမ်းခံရသူ ပုဂ္ဂိုလ်များစွာကို ပထမတွင် ဝင်ဒါမီယာအနီးရှိ အသံလွှင့်ရုံသို့ ပို့ထားခဲ့သည်။ စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဖမ်းဆီးလာခဲ့သူများကို အသံလွှင့်ရုံအတွင်းရှိ ယမန်နေ့ညက ဖက်ဒရယ်မူ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့သော ခန်းမဆောင်ကြီးအတွင်းတွင် ထားရှိသည်။ နံနက် ၆ နာရီခန့်တွင်မူ ဖမ်းထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို လော်ရီကားများပေါ်တင်၍ လက်နက်ကိုင် အစောင့်အကြပ်များ စီးနင်းသောကား လိုက်ပါလျက် မင်္ဂလာဒုံသို့ ပို့ခဲ့သည်။ ထိုနေ့နံနက်က ရာသီဥတုမှာ အုံ့မှိုင်း၍ မိုးတဖွဲဖွဲ ရွာလျက်ရှိသည်။ မင်္ဂလာဒုံသို့ သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင် တင့်ကားများနှင့် စစ်သားများ စောင့်ကြပ်လျက် ရှိသည်။ ဖမ်းဆီးလာသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို မင်္ဂလာဒုံရှိ ရန်ကြီးအောင် တပ်မတော်ရုံရှင်ရုံတွင် စုရုံးထားသည်။ စစ်သားများသည် ဖမ်းဆီးလာသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို လက်ဖက်ရည်၊ နံပြားတို့ဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးသည်ဟူ၍ ကယားဦးစိန်ရေးသားခဲ့သော “အာဏာသိမ်း မှတ်တမ်း” (လက်ရေးမူ) ၌ ဖော်ပြထားသည်။
မကြာမီတွင်ပင် အဖမ်းခံရသူတို့အနက် မန်းဘဆိုင်၊ စဝ်ခွန်ကြည်၊ ဦးဘစော၊ ဒေါက်တာစောလှထွန်း၊ ဦးဇာရဲလျန်၊ ဦးဘမြိုင်နှင့် စဝ်မန်ဖတို့ကို ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်ခေါ်၍ စစ်ရုံးချုပ် (ယခုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်) အတွင်းရှိ ဒဂုံရိပ်သာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းက ခေတ္တတွေ့ဆုံကာ မှားယွင်းဖမ်းဆီးမိကြောင်း ပြောကြား၍ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
မင်္ဂလာဒုံတွင် ဖမ်းဆီးထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များအနက် သမ္မတမန်းဝင်းမောင်၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု၊ တရားဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်သိန်း၊ သခင်တင်၊ စဝ်ခွန်ချို၊ ဦးရာရှစ်နှင့် စ၀်ဝဏ္ဏတို့ကို သီးခြားစီခွဲ၍ အစောင့်အကြပ်ထူထပ်စွာ ချထားခဲ့သည်။ ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်များကို နှစ်စုခွဲ၍ မင်္ဂလာဒုံ ရန်ကြီးအောင် ရုပ်ရှင်ရုံအနီးရှိ လေ့ကျင့်ရေးတပ် (၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ ဗဟိုနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည့် အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီး ယခုအခါ တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး၏ တိုးချဲ့အဆောက်အအုံ) တွင် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
သို့သော် ပထစ အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုနှင့်တကွ ထိန်းသိမ်းထားသူများအား မင်္ဂလာဒုံတွင် ထားရှိရာ၌ အလောသုံးဆယ် စဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသဖြင့် လုံခြုံရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု တပ်မတော်အရာရှိဟောင်း စကြာကြည်ဆွေ ရေးသားခဲ့သော စာတမ်း (လက်နှိပ်စက်မူ) ၌ ဖော်ပြထားသည်။ အကြောင်းမှာ ဖမ်းဆီးခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်အများစုသည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုအတွေ့အကြုံများရှိကြခြင်း၊နယ်ချဲ့ကိုလိုနီများ၏အချုပ်ထောင်မှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ ဖူးသူများ ရှိခဲ့ကြခြင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး တာဝန်ယူထားသော ဗိုလ်မှူး တင်ဦး (နောင် တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်ဦး) သည် လုံခြုံရေး သဘောတရားကို နားလည်ထားသောကြောင့် အထူးဦးနှောက်ခြောက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ရန်ကုန်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၄) နှင့်တကွ အခြားသေနတ်ကိုင် တပ်ရင်းများမှ ရသမျှအင်အားကို ရယူခြင်း၊ လက်နက်ကြီးများမှစ၍ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ သံချပ်ကာတပ်မှ ဘရင်းကိရိယာကားများ တွဲဖက်ထားရှိခြင်း စသည်များကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တပ်တွင်းလုံခြုံရေးနှင့်တကွ တပ်ပြင်တစ်ဝိုက် လုံခြုံရေးအတွက်ပါ အထူးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းသိမ်းထားသူများအား အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုမှ စစ်သင်္ဘောဖြင့် ပင်လယ်ဝအထိ လာရောက်ပြီး ရုတ်တရက် ဟယ်လီဘွန်း စစ်ဆင်ရေးမျိုး ပြုလုပ်ပြီး ကယ်တင်ရန် ကြိုးစားမှုများ ရှိနိုင်သောကြောင့် အရေးပေါ် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများကိုပါ စစ်ထောက်လှမ်းရေးရုံးမှ လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးကို အတွင်းစည်းလုံခြုံရေး၊ အပြင်စည်းလုံခြုံရေးအဖြစ် ခွဲခြားပြီး ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အတွင်းအပြင်အားလုံး၌ အင့်ကာဘာခေါ် ထောက်လှမ်းရေးစနစ်အရ ထောက်လှမ်းရေး အမှုထမ်းများ ပစ္စည်းကိရိယာများသုံးလျက် လည်းကောင်း၊ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ တည်ငြိမ်ကင်းများ၊ လှုပ်ရှားကင်းများ အဖြစ် ထားရှိ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ လုံခြုံရေးစနစ်ကို တိကျစွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၊ ဗိုလ်မှူးတင်ဦးသည် နောင်တွင် အထွတ်အထိပ် ရာထူးကြီးများရရှိကာ သမ္မတဦးနေဝင်း၏ စစ်ဘက်လက်ထောက်အဖြစ် ခန့်ထားခြင်းခံရသည်ဟု ၎င်း၏ စာတမ်း၌ ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:05 AM
ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်ရင်တော့ တိုင်းပြည် ငါးပါးမှောက်မယ်လု...
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေတ္တာရပ်ခံချက်က အချိန်မတန်သေးဘ...
ဦးသန်းရွှေမြေး ဖိုးလပြည့်ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုသော နေပြည...
အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ တပ်ချုပ်ရဲ့ "အား" ကစားကွက် (Power ...
၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံပြင် ရေး အတွက် တွေ့ ဆုံ ရေး ကာကွယ...
အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်နှင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီး...
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ မြေမြှုပ်မိုင်း အသုံးပြု တိုးတက်
သူရိယနေ၀န်း နှင့် ဦးတေဇ ပြဿနာ ပိုမိုကြီးထွားလာပြီ...
ခရိုနီကြီး ဦးတေဇ မြန်မာပြည်ကို ဆီဆွတ်ထားသလော…..
“သမ္မတကြီးအား စာအားဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံရန် ” ဆိုသည်နှင့်...
အာဏာရှင်ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၁၂)
အာဏာရှင်ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၁၁)
ဒီမိုကရေစီရဲ့ ထိချက်၊ တပ်မတော်နဲ့ မိတ်ဖက်
နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချှုပ်အတွင်း ဦးသန်းရွှေ၏ ဓါတ...
အာဏာရှင်ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၁ဝ)
အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၉)
အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၈)
အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်း၏ မြေး ၂ ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေ...
သီတင်းကျွတ်ကန်တော့ပွဲမှ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ မှာကြား...
ဦးနေ၀င်းမြေးနှစ်ဦး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် သမ္မတပေ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး...
ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးမောင်အေး ကျန်းမာရေး ...
အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း - အပိုင်း(၅)
ရေးချင်ရာရေး မတုန်လှုပ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းေ...
ဘောလုံးပွဲ အကြွေးတင်နေသော တပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦး ရေ...
သူခိုးဝန်ကြီးဌာန ၁၈ ခုကို သာဓု ခေါ်ရမလား?
အာဏာရှင်ဗိုလ်နေဝင်း၏ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း(၄)
နေပြည်တော် အသုံးစရိတ် ကြမ်းဟု လွှတ်တော် ဝေဖန်
နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ နောက်ထပ်တောင်းခံငွေ လွှတ်တော် ထက...
တပ်မတော်ရဲ့ အရည်အသွေး ကျဆင်းနေပြီလား
အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ေ...
ကိုနေရွှေသွေးအောင်ကို ဦးသန်းရွှေက နေပြည်တော် ပြန်ခေ...
သတင်းစာ၊ဂျာနယ်များ မရေးရဲတဲ့ ခရိုနီ၊ စစ်အာဏာရှင်ဟေ...
အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၁)